जाला त यसमा सरकारको ध्यान ? | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / जाला त यसमा सरकारको ध्यान ?
जाला त यसमा सरकारको ध्यान ?
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार, स्लाइड May 16, 2018	0 66 Views
ने पालगञ्ज  । ने पालगञ्ज विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने कुरा यतिबे ला जो डतो डले उठे को छ । कसले कहा पहिला कुरा गनेर् भन्ने एकप्रकारको हो ड नै दे खिएको छ ।
चुनावमा यो मुद्दा सबै को एजे न्डामा थियो  । अहिले को मात्रै हो इन यो मुद्दाले एजे न्डाको रुपमा स्थान पाउन थाले को धे रै भइसके को छ ।
ने पालगञ्ज पश्चिम क्षे त्रको सबै भन्दा व्यस्त विमानस्थल हो  । भारतको दिल्ली र लखनऊमा मात्रै यसको उडान जो ड्न सके मा यस क्षे त्रकै विकासमा टे वा पुग्छ । निर्वाचित सांसद, ठूला पार्टीका ने तादे खि ने पालगञ्ज उपमहानगरपालिका यो मुद्दामा जो डतो डले लागे का छन् । यसमा ने पालगञ्ज निवासी ने पाल उद्यो ग वाणिज्य महासंघकी के न्द्रीय अध्यक्ष भवानी राणाको दौ डधुप पनि बढे को छ । ‘भारतीयलाई मात्रै सिधा उडानबाट ने पालगञ्ज ओ राल्न सके मा पर्यटन व्यवसायमा ठूलो प्रगति हुने ’मा सबै को एकमत रहे को छ ।
ने पालगञ्जको अकोर् विकासे एजे न्डामा भे री अञ्चल अस्पतालको स्तरो न्नति गरे र शिक्षण अस्पताल बनाउने रहे को छ । मध्य र सुदूरपश्चिमको ‘रिफरल’ से न्टरको रुपमा रहे को भे री अञ्चल अस् पताल अहिले सम्म गरिवको अस्पताल बनिरहे को छ ।
अन्यत्र क्षे त्रीयस्तरका अस्पतालहरु भए पनि बिरामीलाई यहीं रिफर गरिन्छ । मध्य र सुदूरपश्चिमका २४ जिल्लाका बिरामी रिफर हुने ठाउ हो , भे री अञ्चल अस् पताल । यसको स् तरो न्नति गर्न पनि यतिबे ला सबै लागे का छन् । वार्षिक एक लाख बढी बिरामीको से वा पु¥याउने भे रीमा ‘सरकारी मानसिकता’ राखिदिंदा कर्मचारीहरुको लापरवाही भने बे ला–बे लामा आउने गर्दछ । सरकार परिवर्तनसगै फे रिने अस् पताल विकास समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुका बीचमा तालमे ल नमिले को कुरा बारम्बार आउने गर्दछन् । यसले यहा“को से वा प्रवाहमा असर पु¥याएको छ ।
हुलाकी सडक यहा“को अकोर् बहुप्रतिक्षित यो जना हो  । ने पालगञ्जको पुष्पलालचो कदे खि कटकुइयासम्मको ४४ किलो मिटर सडक यतिबे ला निर्माण भइरहे को छ । यसलाई सरकारले निरन्तरता दिएर छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न गराउन बा“के वासीले जो ड गरिरहे का छन् । भारतले वषांैर् सम्म झुलाएर ने पाल सरकारको का“धमा आइपुगे को हुलाकी सडकले बा“के वासीको जीवनस् तरमा राम्रै महत्व राख्छ । जिल्लाको दक्षिण–पूर्वी क्षे त्रका ५० हजार बढी मानिसलाई सदरमुकामसग जो ड्छ ।
पश्चिमको के न्द्रविन्दु र बढ्दै गएको बजार क्षे त्रले गर्दा ने पालगञ्जमा एउटा सुविधायुक्त सिटी हलको आवश्यकता महसुस गरिएको धे रै भइसक्यो  । ने पालगञ्ज उद्यो ग वाणिज्य संघले सडक विभागलाई भो गचलन गर्न दिएको दश विगाह जमिनमा सिटी हल बनाउने भन्दै वषेर् नि व्यापार मे ला लगाउने गर्दछ ।
चुनावका बे लामा चर्चामा आउने यो एजे न्डा पनि ने पालगञ्जवासीले के न्द्रमा पु¥याएका छन् । सिटी हलका लागि के ही करो ड रुपै या संघले जम्मा पारिसके को छ । सरकारले वषेर् नि २०÷३० लाख रुपै या“ सिटी हलका लागि ने पालगञ्जमा पठाउने र फिर्ता गनेर् गर्दछ । फिर्ता हुने रकमलाई संघको पै सास“ग मिसाउन मिले को छै न ।
ने पालगञ्जमा प्राविधिक कले ज, रिङरो ड, नौ वस्तामा बन्ने भने को औ द्यो गिक क्षे त्र, मानखो ला, भादा, कर्णालीमा तटबन्धको कुरा पनि के न्द्र र प्रदे श सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बन्दै गर्दा उठाइएको छ । बाके बाट निर्वाचित सांसद, विधायक, ने पालगञ्जका मे यर, वाणिज्य महासंघका अध्यक्षलगायतले एकमतका साथ उठाएपछि जिल्लावासीलाई यसपालि के ही हुन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ ।
विधायक आइपी खरे लले बाके र बर्दियाका सांसदले एकमुष्टरुपमा यहाका विकासे एजे न्डालाई संकलन गरे र के न्द्रमा पु¥याएको बताए । उनले प्रदे श सरकारमार्फत पनि आफूहरुले यी एजे न्डालाई सम्बो धन गराउन पहल गनेर् बताए । ‘यी यहाका ठूला एजे ण्डाहरु हुन् । यसको सम्बो धन के न्द्रीय सरकारले गनेर् हो  । हामीले पनि सै द्धान्तिकरुपमा स् वीकार गरे र प्रदे श सरकारमार्फत पहल गछौर् ’– विधायक खरे लले भन्नुभयो  ।
५, ६ र ७ नम्बर प्रदे शको सहज पहुचमा भएर पनि ने पालगञ्ज ५ नम्बर प्रदे शको राजधानीको दौ डमा धे रै कमजो र भएपछि यहाका यी ठूला एजे ण्डाहरु सम्बो धन गराउन सांसद, विधायक, ठूला पार्टीका ने ताहरु लागिपरे का हुन् ।
Previous: प्राकृतिक स्रो तमाथिको दोहन रोकिनै पर्छ
Next: युवासंघको स्थापना दिवस,मै त्रीपूर्ण फुटवलमा पत्रकार समूह विजयी